စုံထောက်အောင်တိုက် နှင့် ကြောင်ဝတုတ်ဂိုဏ်း (၁၄) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စုံထောက်အောင်တိုက် နှင့် ကြောင်ဝတုတ်ဂိုဏ်း (၁၄)
စုံထောက်အောင်တိုက် နှင့် ကြောင်ဝတုတ်ဂိုဏ်း (၁၄)
Posted by ကြောင်ဝတုတ် on May 25, 2012 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 17 comments
တစ်နေ့နှင့်တစ်ည တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ အပြင်းအထန်ပြုပြီးနောက်တစ်နေ့နံနက် (၃)နာရီခန့်တွင် လက်ဖြောင့်ရဲစည်နှင့် အဖော်မိုင်စွန်ခတို့ ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်မှ ထွက်ခွာလာပြီး ပစ်ကွင်းတည်ရှိရာသို့ စီးကရက်ကိုယ်စီဖွာပြီး အေးဆေးစွာထွက်ခွာခဲ့သည်…
ဦးမင်းမတ်မှာ ဘန်ကောက်မြို့မှတစ်ဆင့် အီဂျစ်နိုင်ငံသို့ထွက်ခွာမည့် လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက် အီဂျစ်တွင်အသုံးပြုမည့် တယ်လီဖုန်းပြင်ဆင်ခြင်း၊ လေယာဉ် လက်မှတ်များနှင့် Passport နှင့် ဗီဇာစာရွက်စာတမ်းများကိုအဆင်သင့်ပြင်ဆင်စောင့်ဆိုင်း
ဘိန်းစားပေါက်ဖော်နှင့် မနွယ်ပင်တို့သည် ဆုံရပ်အမှတ် (၁) သတ်မှတ်နေရာဖြစ်သော ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားသို့ သွားရောက်ရန် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများကို ပြင်ဆင်ကြလေသည်…
မောင်အာဂနှင့် ရသေ့ကြီးစည်သူမှာ အထုပ်အပိုးများပြင်လျက် ကျရာနေရာမှ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အသင့်အနေအထားဖြစ်နေပေတော့၏…
ခန့်မှန်းချိန်မှာ နံနက် (၉)နာရီ ရုံးသွားရုံးလာအများဆုံးအချိန် လူအရှုပ်ဆုံးအချိန်…
နှူးဘာဂိုဏ်းချုပ်သမိန်ဂီနှင့် ချာတူးလန်မှာ ကြောင်ကြီးကိုလုပ်ကြံမှုမအောင်မြင်ပါက ဒုတိယအစီအစဉ်အနေဖြင့် အနီးကပ်လုပ်ကြံရန်အတွက် အစီအစဉ်သစ်တစ်ခုကို ရေးဆွဲနေလေ၏…
ခဏအကြာ နှူးဘာဂိုဏ်းချုပ် သမိန်ဂီထံသို့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဝင်လာပြီး “အင်း” ချင်းထပ် ပြောကြားနေသည်ကိုသာကြားရလေသည်…
နံနက် (၃)နာရီ၊ မိနစ် (၂၀)ခန့်တွင် လက်ဖြောင့်ရဲစည်နှင့် မိုင်စွန်ခတို့နှစ်ဦး သတ်မှတ် အဆောက်အဦးပေါ်သို့ရောက်ရှိကြောင်း ဖုန်းစာတိုပို့စနစ်ဖြင့် အကြောင်းကြားသည်…
နံနက် (၅)နာရီအတိတွင်… မောင်အာဂတို့အား စတင်ထွက်ခွာရန် ဘိန်းစားပေါက်ဖော်မှ စီစဉ်တော့သည်… ဟိုတယ်မှငှားရမ်းထားသောကားငယ်တစ်စီးဖြင့် မောင်အာဂတို့ ရွှေတိဂုံဘုရားဆီသို့သွားရောက်ရန်ဖြစ်ပေသည်…
ဆုံမှတ်အမှတ် (၂)သည်ကား ရွှေတိဂုံဘုရား…
ဒုတိယထွက်ခွာသူမှာ ဦးမင်းမတ်… ဟိုတယ်အသင့်စီစဉ်ပေးသော မော်တော်ကားဖြင့် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ထွက်ခွာလေ၏…
မောင်အာဂတို့ထွက်ခွာပြီး မိနစ်(၃၀)ခန့်အကြာ ဘိန်းစားပေါက်ဖော်နှင့် မနွယ်ပင်တို့လဲ ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားဘက်သို့ လမ်းလျှောက်ထွက်ခွာခဲ့ပြီ…
အခန်းအတွင်းတွင် နှူးဘာဂိုဏ်းချုပ်သမိန်ဂီနှင့် ချာတူးလန်တို့နှစ်ယောက် နောက်ဆုံးအခန်းအား ငွေရှင်းပြန်အပ်ရန်နှင့် မူလအစီအစဉ်မအောင်မြင်ပါက ဒုတိယအစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိကြသည်…
အချိန်လွန်စွာနီးကပ်လာသဖြင့် လက်ဖြောင့်နှစ်ယောက်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားလျက်ရှိပေတော့သည်…
နံနက် (၈)နာရီခွဲခန့်တွင် အသားဖြူဖြူလူငယ်တစ်ဦး ဆာကူရာတာဝါနှင့် ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ် ကြားရှိ ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် လွယ်အိတ်တစ်လုံးနှင့် အလှပြင်ဆိုင်လက်ကမ်းကြော်ငြာများကို ဖြတ်သွားသူများအား ဝေငှလျက်ရှိပေတော့သည်…
နံနက် (၈)နာရီ ၄၀ခန့်တွင်…
ကြောင်ကြီး၏ လက်ဝဲရံနှင့် လက်ယာရံဖြစ်သော ကြောင်လတ်နှင့် ကြေးမလောင်တို့ ကြော်ငြာဝေသူ၏အနီးအနားသို့ရောက်ရှိလာပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အားအကဲခပ်လျက် ရှိပေသည်…
လက်ဖြောင့်ရဲစည်မှာ သေနတ်ကိုနှစ်ချောင်းထောက်ဖြင့်သေချာထောက်ထားပြီး အဖော်ဖြစ်သူ မိုင်စွန်ခမှာ လေတိုက်နှုန်းနှင့် စိုထိုင်းစကို တွက်ချက်ကာ အနီးစပ်ဆုံး ပြစ်မှတ်ချိန်ဆရန် လက်ဖြောင့်ရဲစည်သို့သတင်းမှန်မှန်ပို့လျက်ရှိပေသည်…
“ ကျုပ်တို့ကံကောင်းတယ် ကိုရဲစည်…. ကျုပ်တို့ကို ဆူးလေဘုရားကြီးကွယ်နေလို့ ဆာကူရာ အပေါ်က ကြောင်ကြီးရဲ့ စနိုက်ပါမမြင်ရဘူး…
နောက်တစ်ခုက ဂရမ်းမီးရထားခေါင်မိုးပေါ်က စနိုက်ပါကလဲ သုံးတဲ့သေနတ်က အရမ်းအဝေးပြစ်မဟုတ်လို့ ကျုပ်တို့ကိုသဲသဲကွဲကွဲမမြင်ရဘူး…”
“ကံကောင်းတာကနောက်… ပစ်လိုက်တဲအချိန်မှာ လေတိုက်နှုန်းချက်ချင်းပြောင်းသွားလို့ ကတော့ ဘုရားကြီးကို သေနတ်နဲ့ပစ်ပြီးသားပဲ… နောက်တစ်ချက်က ကျုပ်အသံတိတ်ပြောင်းကို ဖြုတ်ပစ်ချင်တယ်… ခင်ဗျားဘယ်လိုသဘောရတုန်း…”
“အခု လေတိုက်နှုန်းအရဆိုရင် ကျည်ဆံကဝေ့သွားနိုင်တယ်… အဲဒီအတွက် အသံတိတ်ပြောင်းတပ်ထားရင် ကျည်သွားအားကိုလျော့စေနိုင်လို့ ပစ်မှတ်ကိုထိဖို့ ရာခိုင်နှုန်းပိုနည်းသွားမယ်…”
“ ဒါဆိုရင် ကျုပ်တို့က ဘယ်လိုလုပ်မလဲ…”
“ မတတ်နိုင်ဘူး…ညီလေး… သေနတ်သံကြားရင် အနီးဆုံရဲစခန်းကလာလိမ့်မယ်… အဲဒီအချိန်မှာ အစ်ကိုတို့ အမြန်ဆုံးဒီကနေထွက်ပြီး… ဘတ်စ်ကားတက်စီးမယ်… ပြီးတာနဲ့သခင်မြပန်းခြံအရောက်ကျမှ ဒီဘက်ကိုပြန်လာတဲ့ကားကိုစီးကြမယ်… အဲဒီလိုကြားဖြတ်စီစဉ်တာ အကောင်းဆုံးထင်တယ်…”
“ ကောင်းပြီလေ… အစ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျွန်တော်လိုက်နာမယ်… စနိုက်ပါဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်စည်းလုံးကြရမယ်လေ….”
သမိန်ဂီလက်မှနာရီမှာ (၉)နာရီထိုးရန် (၂)မိနစ်ခန့်သာလိုတော့သည်… စိတ်စောနေမိသည်… ကန့်လန့်ကာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်…
ထိုစဉ် ဆာကူရာတာဝါနံဘေးသို့ အနက်ရောင်ကားတစ်စီးထိုးစိုက်လာပြီး ကားပေါ်မှာ ဂိုဏ်းချုပ်ကြောင်ကြီးဆင်းလာ၏… နံဘေးတွင် ကြောင်လတ်မှာ ထပ်ချပ်မကွာကာကွယ် ရန်အသင့်အနေအထားဖြင့်လိုက်ပါလာသည်…
ကားလမ်းကိုဖြတ်ကူးလိုက်၏… လမ်းလယ်ပလက်ဖောင်းပေါ်သို့ရောက်သောအခါ လက်ကမ်းကြော်ငြာဝေနေသောကောင်လေးမှ စာရွက်တစ်ရွက်လှမ်းပေးလိုက်သောအခါ ကြောင်လတ်မှာ လက်ဖြင့်တွန်းဖယ်လိုက်ပြီး ကောင်လေးကိုမောင်းထုတ်လေတော့သည်…
ကြော်ငြာဝေသောကောင်းလေမှာ ပလက်ဖောင်း၏အစွန်တခြားတစ်ဖက်သို့ မကြေမချမ်းဖြင့် ထွက်ခွာသွားပြီး သူ့အလုပ်သူဆက်လုပ်နေလေတော့သည်…
ထိုစဉ် ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်ဘက်မှ မျက်မှန်အနက်ကြီးတပ်ထားသော အသက်(၄၀)အရွယ်ခန့်ရှိလူတစ်ဦး လမ်းဖြတ်ကူးလာလေသည်…
“ ကိုရဲစည်ရေ… အဲဒါ KAI ဂိုဏ်းက ဂိုဏ်းချုပ်ဦးခိုင်ပဲ… အခုလာနေတဲ့မျက်မှန်နဲ့လူ”
ဂိုဏ်းချုပ်ဦးခိုင်တစ်ယောက် ကြောင်ကြီးနားသို့ရောက်သောအခါ ကြောင်ကြီးလက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ပြီး (၁၀)မိနစ်ခန့်စကားပြောဆိုပြီးနောက်… ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားလေသည်…
ကြောင်ကြီးမှာ အနှောက်အယှက်မရှိပြီးစီးသွားသောကြောင့် စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာဖြင့် ကားဘက်သို့အလှမ်း….
“ ဒိုင်း” ဟူသောသေနတ်သံနှင့်အတူ ကြောင်ကြီးမှာ ဒူးထောက်ပြီးကျသွားလေသည်…
ထိုစဉ် ကြောင်ကြီးအနားရှိ ကြောင်လတ်မှာ ကြောင်ကြည့်နေရာမှ သတိပြန်ဝင်လာပြီး ကြောင်ကြီးကိုပြေးပွေ့လိုက်၏… လမ်းတစ်ဖက်မှ ကြေးမလောင်လဲ ကြောင်ကြီးရှိရာသို့ အပြေးအလွှားရောက်ရှိလာပြီး…
“သေနတ်သံက ဘုရားဟိုဘက်ကကြားတာ စနိုက်ပါနဲ့ပစ်တာ…”
စကားသံပင်မဆုံးသေး… ကြောင်လတ်မှာ ကြေးမလောင်လက်ထဲသို့ ကြောင်ကြီးအားထည့်ပေးရင်း… ဘုရားဘက်သို့ ပြေးသွားလေသည်…
လုံခြုံရေးယူထားသော ကြောင်ဂိုဏ်းမှ စနိုက်ပါနှစ်ယောက်သည်လဲ မမျှော်လင့်သော အနေအထားအရ သေနတ်များကိုမသိမ်းနိုင်ပဲ ဂိုဏ်းနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ ပြသနာမတက်စေရန် လွတ်ရာသို့ ရှောင်တိမ်းခွင့်ကို ကြောင်လတ်မှ တစ်ဆက်ထည်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်…
လက်ကမ်းကြော်ငြာဝေနေသောကောင်လေးမှာ လွယ်အိတ်ထဲမှ အသံတိတ်ပြောင်းတပ်ထားသော ပစ္စတိုသေနတ်ဖြင့် ကြေးမလောင်အား အနီးကပ်ပစ်ကာ ကြေးမလောင်နှင့် ကြောင်ကြီးအိတ်အတွင်းမှ ဓားမြှောင်လေးနှစ်ချောင်းကို ယူဆောင်ထွက်ပြေးလေတော့သည်…
သေနတ်သမားသည် ဆာကူရာတာဝါအရှေ့ဘက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိ အုတ်တံတိုင်းပေါ်သို့ ခုန်တက်ပြီးနောက် ရန်ကုန်ဘူတာကြီးဝန်းအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားလေသည်…
သေနတ်သံကြာသဖြင့် ကြောင်လတ်မှာ နောက်သို့ပြန်လှည့်လာပြီး အနီးကပ်ပစ်ခတ်သော သေနတ်သမားရှိရာနောက်ပြေးလိုက်သော်လဲ နောက်ကျသွားချေပြီ…
ကြောင်လတ်မှာလဲ လက်ဝယ်သေနတ်တစ်လက်ရှိနေသောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးမှုကို မခံနိုင်သောကြောင့် အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှ အလျှင်အမြန်ထွက်ခွာလာခဲ့ရတော့သည်…
လက်ဖြောင့်ရဲစည်နှင့် မိုင်စွန်ခတို့လဲ အဆောက်အဦးအတွင်းမှထွက်ပြီးပြီးခြင်း ကုန်သည်လမ်းပေါ်ရှိ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှ ကီလီလမ်းဘက်သို့သွားသော ဘတ်စ်ကား တစ်စီးအား အရံသင့်တက်စီးပြီးစတင်ထွက်ခွာခဲ့သည်…
ပေါက်ဖော်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း ညောင်ပင်လေးဈေးမှတ်တိုင်သို့ရောက်သောအခါ ကားပေါ်မှဆင်းပြီး တစ်ဖက်လမ်းကူးပြီး ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားသို့ရောက်မည့် ဘတ်စ်ကား ကိုပြောင်းလည်းစီးနင်းခဲ့သည်…
ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားသို့ရောက်သောအခါ သတ်မှတ်ထားသော ကျော်ဟိန်းဘုရားကြီးအနီးတွင် ဆေးပေါ့လိပ်ဖွာရင်း အကြံထုတ်နေသော ဘိန်းစားပေါက်ဖော်ကို တွေ့လိုက်ရသည်…
“နေရာတော့ ကျပါရဲ့… ခွေးပြေးဝက်ပြေးပဲ…. မြို့တွင်းပစ်ရတာတော်တော် အန္တရာယ်ကြီးသကိုးဗျ…”
“အခုအချိန်လောက်မှ ကျိုက္ကဆံဘက်က အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးတွေ အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကို ပြူးပြဲပြီးရောက်သွားမှာ… အခုလောက်ဆိုရင် ဦးမင်းမတ်လဲ ဘန်ကောက်ကိုရောက်ပြီး အီဂျစ်ကိုဆက်သွားဖို့ ပြင်ဆင်နေလောက်ပြီ…”
“ ဒါဆိုရင် ကျုပ်တို့ဒီနေ့ ဘယ်ကိုသွားမလဲ နောက်ပြီး ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲ…”
“ ဒီကိစ္စကို ကိုရဲစည်မပူပါနဲ့လေ… ကျွန်တော်တို့ ဒီညကို ရွှေတိဂုံဘုရားသောကြာထောင့်မှာ ဆွမ်းချက်ကြမယ်… အကုန်လုံးလဲစီစဉ်ပြီးသား အဲဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ဖြင့် ကျုပ်တို့ရဲ့ရသေ့ကြီးစည်သူက ထောင့်စေ့အောင်စီစဉ်ပြီးသား ပါဗျာ… အခုလောက်ဆို မနွယ်ပင်တောင် ကြက်သွန်တွေခွာနေပြီလားမသိ…”
“ဒါထက် ကျုပ်တို့က နှူးဘာဂိုဏ်းချုပ်တို့နဲ့ ဘယ်လိုဆုံရမလဲ…”
“ နှူးဘာဂိုဏ်းချုပ်တို့က ဒီကိစ္စကို ကြိုတင်စီစဉ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဂျပန်ကနေလာ ကတည်းက ခရီးသွားအဖွဲ့နဲ့လာခဲ့တာ နောက်ပြီး သမိန်ဂီတို့အကုန်လုံးက ဂျပန်နိုင်ငံသား တွေဖြစ်နေပြီးသားမို့ မြန်မာနိုင်ငံကပြန်ထွက်ဖို့ သိပ်ခက်ခဲလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူး…”
“ ဒါဆို သူတို့က ကျုပ်တို့နဲ့မတွေ့တော့ဘူးပေါ့…”
“ ဟုတ်တယ်… မနက်ဖြန်ကို သမိန်ဂီနဲ့ ဦးမင်းမတ်တို့ ဘန်ကောက်မှာတွေ့ကြလိမ့်မယ်… ပြီးရင် သမိန်ဂီက ကြောင်ဂိုဏ်းရဲ့ဓား(၃)လက်နဲ့ ကြောင်ဂိုဏ်းကိုအာဏာသိမ်းပြီး ခေါင်းဆောင်ကြောင်ဝတုတ်ကို အာဏာလွှဲမယ်…”
“ ဒါထက် ပေါက်ဖော်ရ ဓား (၃)လက်နဲ့ဆိုတာက…”
“ ဓား (၃)လက်ကိစ္စကိုပြောရမယ်ဆိုရင် ကြောင်ဂိုဏ်းစတည်ထောင်ခဲ့တဲ့
ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေက ဓားမြှောင် (၄)လက်ကို သွန်းလုပ်ထားခဲ့တယ်… ဓားမြှောင်တစ်ခုစီမှာ အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုစီရှိတယ်… အဲဒီတစ်ခုစီကို ကိုင်ဆောင်သူတွေက ဂိုဏ်းရဲ့အသင့်တော်ဆုံးနေရာကို တာဝန်ယူရတယ်…
(၄) အောင်နိုင်ရေး ဆိုပြီးရှိတယ်…
(၁) အုပ်ချုပ်ရေးကိုတော့ ဂိုဏ်းချုပ်ကြောင်ကြီးလက်ဝယ်မှာရှိနေပြီး ဂိုဏ်းချုပ်အဆက်ဆက် ကိုင်ဆောင်ခဲ့တယ်…
(၂) တရာမျှတရေးကိုတော့ဖြင့် နောက်ဆုံးကိုင်ဆောင်ခဲ့သူက ဦးခန့်ချော… ဘလက်ချောပေါ့ကွာ…
(၃) စီးပွားရေးကိုတော့ ဂိုဏ်းရဲ့ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ ဦးမင်းမတ်
(၄) အောင်နိုင်ရေး ဓားကိုတော့ဖြင့် ကျုပ်တို့ခေါင်းဆောင် ကိုကြောင်ဝတုတ်ကိုင် ဆောင်ခဲ့တယ်ပေ့ါဗျာ…
ကိုကြောင်ဝတုတ်ကို ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာ တရားမျှတရေးဆိုတဲ့ဓားကို ကြေးမလောက်က လက်ခံရရှိပြီး၊ အောင်နိုင်ရေးဆိုတဲ့ ဓားကိုတော့ဖြင့် ကြောင်လတ်က ရရှိထားသကိုး…
အခုအချိန်အထိ ဦးမင်းမတ်ဟာ ဂိုဏ်းအကျိုးစီးပွားအတွက်ငွေကြေးအထောက်အပံ့ကို အမြဲလုပ်ပေးနေကျဖြစ်တဲ့အပြင် ဂိုဏ်းချုပ်ကြောင်ကြီးကို အတိအလင်းပုန်ကန်တဲ့အထဲ သူမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် အခုအချိန်မှာလက်ထဲ စီးပွားရေးဆိုတဲ့ဓားက ရှိနေတုန်းပေါ့ဗျာ…”
“ဒါဆိုရင် အခု ဓား(၃)ချောင်းကတော့ ကျုပ်တုိ့ဘက်မှာရှိနေပြီဆိုပါတော့…”
“ ဟုတ်ပါတယ်… အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတဲ့ဓားရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့လူတွေအားလုံးကို လွှတ်ပေးလိုက်နိုင်သလို ကြောင်လတ်ကိုဂိုဏ်းအတွင်း ပြန်လာအောင် ကျုပ်တို့ဆင့်ခေါ်နိုင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဂိုဏ်းကြီးကို ပြန်လည်တည်ထောင်နိုင်မှာပေါ့ဗျာ…မဟုတ်ဘူးလား…”
အောင်တိုက် ။ ။ ဒါဆိုရင် ရန်ကုန်မြို့လည်မှာ သေနတ်နဲ့ပစ်သွားတဲ့အမှုက ဂိုဏ်းတွင်းအာဏာလုပွဲဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် တိုင်းပြည်ရဲ့လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေတာပဲ ဦးဘလက်…
ဘလက်ချော ။ ။ တိုင်းပြည်လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်မှဖြစ်မယ့် ဂိုဏ်းအခြေအနေမို့လို့ ကျုပ်ပြောရင် ကိုအောင်တိုက်လက်ခံမှာလား
အောင်တိုက် ။ ။ ကျုပ်က ကြောင်ဝတုတ်ဂိုဏ်းသားမှမဟုတ်တာ… ဒါပေမယ့် မြို့လည်ခေါင်မှာ လူတစ်ယောက်ကို သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်တာတော့ ဥပဒေမဲ့ရာရောက် နေပါတယ်… ဦးဘလက်ချောရာ….
ဘလက်ချော ။ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကဖြစ်တဲ့ကိစ္စ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကလဲ ထောက်လှမ်းလို့မရတဲ့အချိန်မှာ ကျုပ်တို့ဂိုဏ်းသားတွေအကုန် ဘေးကင်းရာကိုရောက်သွားကြပြီလေ…
အောင်တိုက် ။ ။ မကောင်းမှုဆိုတာ ဆိတ်ကွယ်ရာတော့မရှိပါဘူးဦးဘလက်ချော… ဒါထက် ခုနခင်ဗျားပြောပြနေတာတွေက ခင်ဗျားတို့ဂိုဏ်းတွင်းကိစ္စတွေ… ကျုပ်သိချင်နေတာက ခင်ဗျား ဘာဖြစ်လို့ မင်းသမီးဆူးခက်ကို သတ်လိုက်သလဲဆိုတာပဲ…
ဘလက်ချော ။ ။ သွေးသစ္စာလေဗျာ… ဂိုဏ်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အခက်အခဲဖြစ်လို့ အားကိုးတကြီးလာခဲ့တဲ့ ဂိုဏ်းသားတွေကို အကူအညီမပေးခဲ့တဲ့အမှုကို ကျုပ်ကိုယ်တိုင် အရေးယူခဲ့တာပဲ ကိုအောင်တိုက်….
အောင်တိုက် ။ ။ ဒါဆိုရင် ဘာလို့ဂိုဏ်းချုပ်ကြောင်ဝတုတ်က ခင်ဗျားကိုလိုက်တားတုန်း
ဘလက်ချော ။ ။ ဂိုဏ်းချုပ်က သဘောထားပြည့်ဝတယ်… သူ့မှာလဲ အခက်အခဲရှိမယ်ထင်တယ်ဆိုပြီး ကျုပ်ကိုတရားဝင်အရေးယူခွင့်မပေးခဲ့ဘူး…
အဲဒီအချိန်မှာ နောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းအရ မင်းသမီးဆူးခက်က သူ့ရဲ့ဂိုဏ်းဝင် ဆေးမြင်ကြောင်ကို ပြင်သစ်ရောက်တုန်း ဖျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာပဲ… ဒါဟာဂိုဏ်းရဲ့ဂုဏ်ကို ညှိုးနွမ်းအောင်လုပ်တယ်လို့ ကျုပ်ခံစားရလို့ မင်းသမီးဆူးခက်ကို သတ်လိုက်တာပဲ…
အောင်တိုက် ။ ။ ခင်ဗျားပြောပုံအရဆိုရင်… မင်းသမီးဆူးခက်က ဂိုဏ်းကနေထွက်ခွာဖို့ ကြံစည်နေလို့ခင်ဗျားသတ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့… အဲဒီအတွက် ဂိုဏ်းချုပ်က ခင်ဗျားအပေါ်မှာ အရေးယူတာတွေ ဘာတွေရောမလုပ်နိုင်ဘူးလား ဦးဘလက်ချော…
ဘလက်ချော ။ ။ ဂိုဏ်းအတွက်လုပ်တာပဲဗျာ… သူပေးတဲ့အပြစ်ကို ပြီးမှခံမယ်…
အောင်တိုက် ။ ။ ခင်ဗျားပြောသမျှတွေထဲမှာ လွဲနေတာတစ်ခုတော့ရှိနေတယ်… အဲဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကို ဆက်စပ်ဖို့ကြောင်လတ်ဆိုတဲ့ ဂိုဏ်းသားကို ကျုပ်တို့တွေ့ဖို့လိုနေပြီ ဦးဘလက်ချော…
ဘလက်ချော ။ ။ ဗျာ… ခင်ဗျားက ကြောင်လတ်ကိုရှာချင်တယ်…
လက်ကျန်နဲ့ ဆက်ရန်တွေကို အမြန်ဆုံးရေးပါဗျို့ …..
ဂိုဏ်းချုပ်က သဘောထားကြီးတယ်ဆိုပဲ … ဟိဟိ
ဒီမှာဖြင့် ရေးထားတာတွေအကုန်လုံးပျက်သွားလို့ ပြန်တွေးပြီး ပြန်ရေးနေရလို့ အဲဒီလောက်ကြာသွားတာပါ….
အော်စာရေးသူကြီး တေပလားမှတ်တယ် ရှိသေးတာကိုးးးးးးးးး…
ခင်ဗျားဗျာ ဒီတလျှောက်လုံး ကိုအာဂ နဲ. မနွယ်ဘင်ကို တွဲကိုပေးမထားဘူး သနားပါတယ်သူတို. အဲဒါကြောင့် ခင်ဗျား မဒမ်နဲ.ပြသာတက်တာ အဲဒါဝတ်လည်တာ… ဘယ်နှယ့် ၀တ္တုထဲမှာ သူတို.နှစ်ယောက်တွဲပြီး လပ်ဖ်ဆင်းလေးလဲ ထည့်ပါအုံးဗျ ခင်ဗျားနှယ့် ……….
စုံထောက်အောင်တိုက် လေး ပြန်ပါလာလို. တော်သေးတယ် ငှဲငှဲငှဲ.. မသိပါဘူး စီအိုင်ဒီက နယ်ပြောင်းပလိုက်ပြီးလားလို. စိုးရိမ်နေတာ………
ကိုဖက်ဒီတစ်ခေါက် ပို.စ်တစ်ခုနဲ.တစ်ခု ကွာသွားလို.ကတော့ ယူနန်ပဲနော်. ဟွင်းဟွင်း
ရန်ကုန်ရောက်တုံး တို့ကိုတောင် လာမတွေ့နိုင်ရှာပါလာကွယ်
ကြောင်ဂျီး အလောင်းကို သေချာစစ်.ကြပါဦး အတုလား အစစ်လား ဆိုတာ
အက်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲကြီးနဲ့ ကျနော့်နာမည်က အံဝင်ဂွင်ကျမဖြစ်လိုက်တာဗျာ..
ဒီကြားထဲဂိုဏ်းချုပ်နဲ့မှ တွဲထားတာဆိုတော့ ပိုဆိုး
အူးကြောင်သေပီ ဆိုဖြင့် ကျုပ်ကိစ္စပြီးလောက်ပီ ထင်ရဲ့…….
ဂိုဏ်းချုပ်အနေနဲ့လဲ KAIဂိုဏ်းနဲ့ သိပ်ပတ်သက်မှု မရှိရင်ဖြင့် ဥူးခိုင်ကို ထပ်မလုပ်ကြံပါနဲ့တော့ သူ့ခမျာ ရန်ကုန်လာဖို့ ကြောက်နေရှာတော့မယ်
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ဆူးလေဘုရားနားက အမြင့်ဆုံး အဆောက်အအုံဆိုတော့ မြ၀တီဘဏ်ရှေ့လောက် သွားကြမျာပေါ့ဗျာ ကျုပ်ပစ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာဖြင့် ဗြိတိသျှသံရုံးက ရေဒါထဲများ မိသွားမလား စိုးရိမ်မိတယ် သေရင်သေပါစေဗျာ အဖမ်းတော့ မခံပါရစေနဲ့ ရုံးချိန်းခဏခဏ သွားချင်ဘူးရယ်
နှစ်ပိုင်းလောက် ပေးပါလို့ ကျေးကျေးပါဗျာ အားပေးနေပါတယ်
သူကြီးသမီးက ဒီဇာတ်မှာတော့ ဟန်ကျနေတာပဲ
အပြင်မှာ အဲ့ဒီလောက် သွက်ပါ့မလား။
ဘယ့်နှယ် ကြောင်ဂိုဏ်းမှာ သွား ပါနေရတာလဲ။
ကြောင်ကြီးသေဗူး… ထွက်ရပ်ပေါက်သွားဒါ အသေထွက်..။ ရွာသူများဂို စောင်မကြည့်ရှုဖို့ ရွာသားများဂို စောင့်ကန်ဖို့ ပျံလာဂဲ့မည်…။ ကံဒေါ့ဗွဲနဲ့အတူ စောင့်မျှော်ဂျ..။
မင်းသမီး ဆူးခက် ပြင်သစ်မှာ သွားဖျက်တဲ့ ဆေးမင်ကြောင်ကို
ဘယ်လိုမျိုး ထိုးပေးလိုက်တယ် ဆိုတာလေးတော့. သိချင်သား
ကြောင်ဂိုဏ်းပါဆိုမှဗျာ ဘာရုပ်ထိုးလိမ့်မတုန်း …
မင်းသမီး တို့များ သတ္တိကောင်းချက် …
ကျောလုံးပြည့် ..ထိုးတာတောင် …လုံးဝ အပြုံးမပျက်ဘူး ..
ဘာပုံလဲ သိလား …
မစ်ကီမောက်စ် ပုံ ..
ဂဘာမှာ ဘယ် ယာကူဇာ မာဖီးယား မိုက်လှပါတယ် ဆိုတဲ့
ကောင်တွေတောင် မထိုးရဲတဲ့ ပုံနော..
ဘယ့်နှယ့် ကျောလုံးပြည့် မစ်ကီးမောက်စ် ပုံပါဆို…
အမလေး.. နာမည်တွေ အလွဲသုံးစား လုပ်နေကြပါလား.. တလားဆွဲမယ် တလားထဲကို ထည့်ပြီးတော့ ဆွဲမယ်.. (အခေါင်းတလား) ဟိုထဲကို ထည့်ဖို့.. ဟွန့်..
သိတ် ရက်စက်တတ်တဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူးကွယ်။
အော် ပါဏာတိပါတာ ….။
ဒီဇာတ်လမ်းကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ ကန်တော့ပွဲပေးတဲ့ အခမ်းအနားကို ပဒုမ္မာစားသောက်ဆိုင်မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ရွာသူရွာသားများ စာရေးဆရာထံမှာ ဖိတ်စာယူပြီး ဖိတ်စာနှင့်တကွ ကြွရောက်နိုင်ပါကြောင်း။
ကြောင်ကြီး သေသည်ဖြစ်ဖြစ် မသေသည်ဖြစ်ဖြစ်
ရွာသူများအတွက် မောင်ပေ ရှိနေမည်ဖြစ်ကြောင်း ရယ်ပါ။